SIDA AY CIMILADU U SAAMEEYSAY KOORASKA OLOLAHA BEEREED EE UKRAINE - MAQAALLO
Sida ay cimiladu u saameeysay kooraska ololaha beereed ee Ukraine
Maajo 3, 2019, falanqeeyayaasha hay'adda macluumaadka Warfaafinta Warshadaha ayaa kormeeray xaaladda gobolka ee ololaha beeraha ee dalka. Beeraley badan ayaa soo sheegay in xaaladaha cimilada ee aan xumayn ay saameyn ku yeelatay ololaha beereed. Laakiin tiro ka mid ah gobollada, roobab culus, roobabka dabaysha iyo dabayl xoog leh ayaa waxyeelo u gaystay caleemaha guga hore iyo dalagyada xilliga qaboobaha.
Inta badan dadkii ka jawaabay gobollada bartamaha iyo koonfurta ee dalka Ukraine ayaa sheegay in cimilada cimilada ee isbuucaan hadda aysan saameyn xun ku yeelan karin ololaha beereed.
Ka dib roobab, beeralaydu waxay awoodeen inay sii wadaan hawsha beeraha sababtoo ah joogitaanka ku filan ee qoyaanka ee ciidda. Soo saarayaasha beeraha ayaa ogaaday in dalaggooda xilliga qaboobaha iyo xilliga guga ay leeyihiin xaalad wanaagsan oo ku qanacsan.
Beeralayda degmada Krinichansky ee gobolka Dnepropetrovsk, degmada Odessa cusub ee gobolka Nikolaev, degmada Tokmak ee gobolka Zaporozhye, iyo degmada Shpolyansky ee gobolka Cherkassy ma ku faraxsan yahay cimilada. Waxay soo sheegeen in roobabka iyo dabaysha xooggan ay qayb ahaan burburiyeen beerahooda, laakiin beeraleydu ma rabaan in ay dalagaan beerahooda.
Horaantii waxaa la soo wariyay in beeralayda qaar ka mid ah gobolka galbeedka dalka ay ka warheleen baahida loo qabo beerashada dib-u-beerashada, halkaas oo ay beeraha daadad iyo dabayl ka buuxsameen.